အိုင်တီလူမျိုးများ(သို့ )None Access Denied - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
All GroupsMy Groups အိုင်တီလူမျိုးများ(သို့ )None Access Denied
Created by မင်းမင်းဇော်
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မူရင်းWebsite www.noneaccessdenied.weebly.com,
နည်းပညာ ကိုအခြေခံတဲ့ website လေးပါပဲ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်....အဲနေရာလေးကိုလဲ......
။ကျေးဇူးတင်ပါသည် မန်ဘာအားလုံးအား။လိုအပ်သည်များကိုလည်းComments Box မှတဆင့်မေးနိူင်ပါသည်။မန်ဘာ မ၀င်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအုံး။
Nad Sharing Group!!!
G-mail သုံးစွဲသူတွေအတွက် G-mail အကောင့်တွေ Lock ကျသွားတာတွေကြုံဖူးမှာပါ။အကောင့်ကိုဝင်လိုက်၇င် username နဲ့ password လဲမှန်တယ်အကောင့်က၀င်လို့မ၇ပဲ…Continue Started by မင်းမင်းဇော်. Last reply by khant zaw thet Sep 12, 2013. သင်သုံးနေတဲ့ Password ကလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား.
အွန်လိုင်းကို အသုံးအပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမှာ အနည်းဆုံး ကိုယ်ပိုင် password တစ်ခုကတော့ရှိရမှာပေါ့။email password ကစပြီး ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ passwordတွေလည်းရှိကြမှာပါ..။အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတိုင်းဟာ…Continue Started by မင်းမင်းဇော်. Last reply by wai phyo Oct 20, 2011. Software : Beauty Studio V1.75
မိတ်ကပ် နှင့် အခြား ကာလာများကို ပြင်တာကြိုက်သက်သော ပရိတ်သပ် များကို Beauty Studio နဲ့မိတ်ဆက် ပေးခြင်ပါတယ်။ Beauty Studio က ဓါတ်ပုံတွေကို အရောင်ပြောင်းခြင်း စသော အရာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်…ContinueTags: photoshop Started by မင်းမင်းဇော် Oct 19, 2011. အသုံးဝင်တဲ့IT websiteများ...
1. www.myanmarengineer.org 2. www.mysteryzillion.org 3.…ContinueTags:ှဆိုက်လင့်ခ်များ Started by မင်းမင်းဇော် Oct 19, 2011. View All
You need to beamember of အိုင်တီလူမျိုးများ(သို့ )None Access Denied to add comments!
Comment by Hsatpaing on December 4, 2012 at 9:09pm အသင်းဝင်သွားပါတယ် Comment by မင်းမင်းဇော် on October 19, 2011 at 9:15pm မန်ဘာများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နူတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်နော်..... Members (25)